Indray Andro Izay, Naka an-keriny Ahy Ry Zareo : Sarimiaina Miampanga Ny Fakàna Vehivavy an-keriny ao Kirghizistan Mba ho Vadiana · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Edwige Dugas
Voadika ny 19 Avrily 2017 8:44 GMT
Sarotra ny hahazo antontanisa tena marina, saingy asehon'ny fandalinana iray tanisaina matetika fa efa ho ny ampahatelon'ireo tokantrano naorina tao Kirghizistan no vokatry ny fakàna an-keriny tsy nifanekena.
Taona dimy lasa izay, ny Global Voices dia nametraka tety anaty aterineto andiany iray aminà lahatsary novokarin'ny fikambanana iray ao an-toerana miaro ny zon'ny vehivavy sy mampiroborobo ny fampiharana ny lalàna iray momba ny fakàna an-keriny. Tsotra ny hafatra entin'ireny lahatsary ireny : voararan'ny lalàna ny fakàna an-keriny vehivavy mba hovadiana, ary araka izany, tokony hotoriana sy hosaziana.
Ny tantaran'i Guljan (‘Nargiza’) no andiany farany amin'ireo andiany dimy. Hazavain'i Zelenskaïa ao anaty lahatsoratra iray ho an'ny Kloop.kg ny antony namivoaka farany azy tao anatin'ilay andiany :
Tajikistan 4 andro izay